Archibelgium Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Thanksgiving ayaa had iyo jeer maalin fasax ah oo aad u dhaqanka wareegi hareeraha qoyska, turkey, iyo kubada cagta. Si kastaba ha ahaatee, kuwa idinka mid ah ee ku raaxeysta safarka oo u isticmaali kara deg deg deg deg ah waa inay tixgeliyaan ku kharash gareeynta sanadkaan fasaxa ah mid ka mid ah Magaalooyinka Ugu Fiican ee Booqo Thanksgiving-ka…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Boobka map a of Europe oo go'aan ka halkaas oo si ay u tagaan noqon kartaa qarow! Haa, gaar ahaan haddii aad heysato oo dhammu waa laba todobaad. On qaaradda si kala duwan oo hodan ku ah dhaqanka, labadii toddobaad ee u ekaan kartaa mid aad u gaaban! Sidaa darteed, waa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee…